2 Siyaabaha inuu ka soo kabsado iPhone Data Khasaaray ka dib celinta si Settings Factory
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado iPhone Data Khasaaray ka dib celinta si Settings Factory
Sidee inuu ka soo kabsado iPhone Data Khasaaray ka dib celinta si Settings Factory
Ma u baahan tahay inuu ka soo kabsado xogta iPhone ka dib soo celin!
My iPhone galay hab kabashada ka dib markii isku day ah in la gaarsiiyo in macruufka 9. Si aad u hesho ka mid ah hab-kabashada, Waxaan u lahaa inay u soo celiso goobaha warshad. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan xogta aan ku leeyahay ayaa laga badiyay. Ma jiraa hab aan dib ugu heli xogta iPhone ii?
Oo hadlaya guud, marka aad ka iPhone tirtirto xogta, waxa aan la tageen weligiis degdeg ah, laakiin kaliya uu noqonayaa aan la arki karin oo la overwritten karaa iyadoo wixii macluumaad cusub. Sida ay u soo celinta iPhone in goobaha warshad, waa wax yar adag tahay, maxaa yeelay, xogta ayaa laga yaabaa in la overwritten inta lagu guda jiro dib u soo celinta. Waxay arrintu u muuqataa wax aan macquul aheyn inuu ka soo kabsado xogta ka iPhone ka dib markii warshad dejinta celin. Dhab ahaantii, weli waa fursad. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waxa weeye qalab kabashada xogta iPhone. Hoos waxaa ku qoran 3 siyaabo fudud oo ay ku soo kabsadaan xogta iPhone ka dib loo soo celiyo.
Waxa kale oo aad ka fiirin kartaa articles hoos ku eegayo nooca file aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado ah:
Farriimaha qoraalka ka soo kabsado iPhone >>
Kabsado photos lumay ka iPhone >>
Kabsado xiriirada lumay ka iPhone >>
Kabsado xogta iPhone laga badiyay ka dib markii warshad dejinta celin!
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (iPhone Data Recovery)
* Ladnaansho xiriirada iPhone, fariimaha, qoraalada, soo wac taariikhda, sawiro, video, iyo wixii la mid ah.
* socon la macruufka dambeeyay 9 iyo taageerada iPhone 6s ( Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
* dib u data waayay tirtirka, khasaaraha qalab, JAILBREAK, macruufka 9 hagaajinta ama warshad dejinta celin.
Qeybta 1: Waraaqda kaabta Lugood dib u soo ceshano Data Previous iyo Lost Data
Qeybta 2: Download iyo Sawirka Lugood inuu ka soo kabsado Data Previous
Raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
1. Orod barnaamijka iyo dooran "kabsado Lugood ee kaabta File".
2. Dooro file gurmad ka mid ah liiska soo bandhigay by Dr.Fone ah, oo guji "Start Scan" si aad u hesho waxa ay soo bixiyay.
3. Marka scan ka istaago, waxaad ku eegaan karo iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka natiijada scan si aad u computer. Waxaa la samayn karaa in mid ka mid click.
Fiiro gaar ah: Sidaas, waxaad ma soo kaban karto oo kaliya xogta jirta in gurmad Lugood ah, laakiin sidoo kale ka soo kabsado kuwa xogta la tirtiro, taas oo aan la soo celin karin si toos ah uga soo Lugood in aad iPhone.
Qeybta 2: Download iyo Scan iCloud inuu ka soo kabsado Data Previous
1. Orod barnaamijka iyo dooran "kabsado kaabta iCloud".
2. Log in aad xisaabta iCloud. Dooro file gurmad aad rabto in aad kala soo bixi oo laga soosaaray.
3. Hubi content gurmad ah oo sax inuu ka soo kabsado shayga aad rabto in aad computer.
Fiiro Gaar ah: Waxaa gebi ahaanba ammaan si ay u gasho in aad xisaabta iCloud iyo soo bixi faylka gurmad. Dr.Fone Haysan maayo record kasta oo macluumaadka iyo xogta. File ayaa lagala soo bixi waa la badbaadiyey oo kaliya on your computer gaar ah oo aad tahay mid ka mid ah oo kaliya in ay helaan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad isticmaasho Mac ah, u isticmaalaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) iyo shaqeeyaan tallaabooyinka la mid ah sida kor ku xusan. Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa Wondershare TunesGo in ay dajiyaan aad sawiro, video iyo xiriirada aad iPhone effortlessly.
Download version tijaabo ah Wondershare Dr.Fone ee macruufka hoos ku qoran in ay hadda leeyihiin isku day ah oo lacag la'aan ah.
Sida loo Cad History Browser iyo cookies on iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Picture Messages ka iPhone